Xiaomi Mi 9 SE ga - abata na ahịa Europe | Gam akporosis
Xiaomi Mi 9 SE ga-amalite oru n'oge na-adịghị anya
Otu ọnwa gara aga E gosipụtara Xiaomi Mi 9 SE n'eziokwu, ụdị ọhụrụ n'ime nke kachasị dị elu nke akara ndị China. Mgbe egosiri ekwentị ahụ, ekesara ọtụtụ ozi gbasara mmalite ya. Ọ bụ ezie na nke nta nke nta anyị na-amalite na-enweta data na nke a. Ebe ọ bụ na mmemme nke mba ahụ dị nso karịa mgbe ọ bụla.
O yiri ka ụlọ ọrụ ahụ amalitelarị usoro asambodo nke ngwaọrụ. Nke na-eme ka o doo anya na Xiaomi Mi 9 SE dị nso ịmalite mba ụwa. Ya mere, ọ bụ ihe dị n’izu tupu ihe atụ a ga-arụ ọrụ n’ụwa niile.
Companylọ ọrụ ahụ n'onwe ya Ọ gwaghị anyị ihe ọ bụla n'oge ahụ maka mmepe mba ụwa nke ihe nlereanya a. Mana enwere ndị mgbasa ozi na-akọ na usoro a nke inweta asambodo mba ụwa maka mmalite ya amalitelarị. Yabụ ihe niile anyị ga - eme bụ ichere nkwenye site na mbinye aka ahụ.
Ihe data ozo anyi na amaghi bu ego nke Xiaomi Mi 9 SE a ga enwe na igba egbe ya na Europe. Na ya igba egbe na China ekwentị nwere nwere ọnụahịa nke 262 na 301 euro iji gbanwee n'ụdị ya abụọ. Anyị amatabeghị ma a ga-ebupụta ụdị abụọ a nke etiti a na Spain. Kedu ka o mere na Mi 9.
O nwere ike imecha bụrụ otu n'ime nsụgharị abụọ ahụ bụ nke ewepụtara na Europe. Ọ bụ ezie na anyị ga-echere ruo mgbe enwere nkọwa doro anya na nke a site na ụlọ ọrụ ahụ. Obi abụọ adịghị ya na mwepụta nke mmasị maka akara ndị China. Ebe ọ bụ na a gosipụtara Xiaomi Mi 9 SE nnukwu uru maka ego.
Yabụ n'ime ụbọchị ole na ole anyị kwesịrị ịnwe data na mwepụta nke a Xiaomi Mi 9 SE na Europe, ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ na Spain. Ekwentị nke akara ndị China na-achọ iji melite ọnụnọ ya n'ahịa, na melite ahịa ha nwere n'afọ gara aga, ahịa ya kacha mma ruo ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi Mi 9 SE ga-amalite oru n'oge na-adịghị anya
Nubia Red Magic 3 ga-egosipụta sistemụ ngwakọ ngwakọ
WhatsApp ga-egosi ma ọ bụrụ na e zigara ozi ọtụtụ ugboro